6 Jehova wee gwa Mozis okwu ọzọ, sị: 2 “Gwa ụmụ Izrel okwu, sị ha, ‘Ọ bụrụ na nwoke ma ọ bụ nwaanyị aṅụọ iyi pụrụ iche ibi ndụ dị ka onye Naziraịt+ nke Jehova, 3 ọ ga-ezere mmanya na ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu. Ọ gaghị aṅụ mmanya gbara ụka ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu+ nke gbara ụka, ọ gaghịkwa aṅụ ihe ọṅụṅụ ọ bụla si ná mkpụrụ vaịn, ọ gaghịkwa ata mkpụrụ vaịn ma ọ bụ nke a ghọtara ọhụrụ ma ọ bụ nke a mịkpọrọ amịkpọ. 4 N’ụbọchị niile ọ bụ onye Naziraịt, ọ gaghị eri ihe ọ bụla e ji vaịn mee, ma mkpụrụ vaịn na-achaghị acha ma mkpo ya. 5 “‘N’ụbọchị niile ọ bụ onye Naziraịt dị ka nkwa o kwere si dị, agụba agaghị emetụ ya n’isi;+ ruo mgbe oge e doro ya iche nye Jehova ga-ezu, ọ ga-abụ onye dị nsọ site n’ịhapụ ntutu+ isi ya ka o too eto. 6 N’ụbọchị niile o doro onwe ya iche nye Jehova, ọ gaghị abịa mkpụrụ obi ọ bụla nwụrụ anwụ nso.+ 7 Ọ gaghị emerụ onwe ya ọbụna n’ihi nna ya ma ọ bụ nne ya ma ọ bụ nwanne ya nwoke ma ọ bụ nwanne ya nwaanyị ma ha nwụọ,+ n’ihi na ihe na-egosi na ọ bụ onye Naziraịt nke Chineke ya dị n’isi ya. 8 “‘Ụbọchị niile ọ bụ onye Naziraịt, ọ dị nsọ nye Jehova. 9 Ma ọ bụrụ na mmadụ ọ bụla anwụọ na mberede n’akụkụ ya,+ o wee merụọ isi o ji bụrụ onye Naziraịt, ọ ga-akpụ+ isi ya n’ụbọchị a ga-eme ka ọ dị ọcha. N’ụbọchị nke asaa ka ọ ga-akpụ isi ya. 10 N’ụbọchị nke asatọ, ọ ga-ewere nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ bịakwute onye nchụàjà n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute.+ 11 Onye nchụàjà ga-eji otu chụọ àjà mmehie+ ma jiri nke ọzọ chụọ àjà nsure ọkụ+ iji kpuchiere ya mmehie, ebe ọ bụ na o mehiewo n’ihi mkpụrụ obi nwụrụ anwụ. Ọ ga-edo isi ya nsọ n’ụbọchị ahụ. 12 Ọ ga-ebi ndụ dị ka onye Naziraịt+ nke Jehova n’ụbọchị niile ọ bụ onye Naziraịt, ọ ga-akpụta nwa ebule na-agafebeghị otu afọ ka ọ bụrụ àjà ikpe ọmụma;+ a gaghịkwa agụnye ụbọchị ndị gara aga n’ihi na o merụrụ ọbụbụ ọ bụ onye Naziraịt. 13 “‘Nke a bụ iwu banyere onye Naziraịt: N’ụbọchị ọ nọzuru+ oge ya dị ka onye Naziraịt, a ga-akpọta ya n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute. 14 Dị ka onyinye ọ ga-enye Jehova, ọ ga-eweta nwa ebule ahụ́ dị mma nke na-agafebeghị otu afọ ka ọ bụrụ àjà nsure ọkụ,+ wetakwa obere nne atụrụ nke ahụ́ dị mma nke na-agafebeghị otu afọ ka ọ bụrụ àjà mmehie+ ma weta otu ebule ahụ́ dị mma ka ọ bụrụ àjà udo,+ 15 tinyere otu nkata achịcha na-ekoghị eko nke e ji ntụ ọka*+ e gwere nke ọma mee, nke a gwara mmanụ,+ nakwa achịcha na-ekoghị eko dị fere fere nke e tere mmanụ n’elu ya,+ tinyere àjà ọka+ ha na àjà ihe ọṅụṅụ ha.+ 16 Onye nchụàjà ga-eche ha n’ihu Jehova ma chụọ àjà mmehie ya na àjà nsure ọkụ ya.+ 17 Ọ ga-ejikwa ebule ahụ chụọrọ Jehova àjà udo,+ ya na nkata achịcha ahụ na-ekoghị eko; onye nchụàjà ga-achụkwa àjà ọka+ ya na àjà ihe ọṅụṅụ ya. 18 “‘Onye Naziraịt ahụ ga-akpụ+ isi o ji bụrụ onye Naziraịt n’ọnụ ụzọ ụlọikwuu nzute, ọ ga-ekporo ntutu isi o ji bụrụ onye Naziraịt wụnye n’ọkụ nke na-ere n’okpuru anụ àjà udo ahụ. 19 Onye nchụàjà ga-ewere otu ọrụ aka ebule ahụ e siri esi+ na otu achịcha na-ekoghị eko n’ime nkata ahụ, na otu achịcha na-ekoghị eko dị fere fere,+ ọ ga-atụkwasị ha n’ọbụ aka onye Naziraịt ahụ mgbe ọ kpụchara isi na-egosi na ọ bụ onye Naziraịt. 20 Onye nchụàjà ga-efegharị ha ka ha bụrụ àjà a na-efegharị efegharị n’ihu Jehova.+ Ọ bụ ihe dị nsọ nke dịịrị onye nchụàjà, tinyere obi+ anụ àjà ahụ a na-efegharị efegharị na ụkwụ nke anụ ahụ e nyere n’onyinye.+ E mesịa, onye Naziraịt ahụ nwere ike ịṅụ mmanya.+ 21 “‘Ọ bụ nke a bụ iwu banyere onye Naziraịt+ nke kwere nkwa, banyere onyinye ọ ga-enye Jehova n’ihi ịbụ onye Naziraịt, ma e wezụga ihe o nwere ike inye. Dị ka nkwa ọ pụrụ ikwe si dị, otú ahụ ka ọ ga-eme n’ihi iwu na-achị ya dị ka onye Naziraịt.’” 22 Jehova wee gwa Mozis, sị: 23 “Gwa Erọn na ụmụ ya ndị ikom, sị, ‘Otú a ka unu ga-esi na-agọzi+ ụmụ Izrel, na-asị ha: 24 “Ka Jehova gọzie+ gị ma chebe gị.+ 25 Ka Jehova mee ka i nweta ihu ọma ya,+ ka o meekwara gị amara.+ 26 Ka Jehova chee ihu n’ebe ị nọ+ ma nye gị udo.”’+ 27 Ha ga-eji aha+ m gọzie ụmụ Izrel, ka m wee gọzie ha.”+